Nhau - Chii chinonzi WPC Cladding & Inoshandiswa Sei?
WPC kuputira izita rekuvaka. Izvo zvakare zvine hushamwari zvekuvaka zvinhu zvinonyanya kushandiswa kunze. Kuvhara kunogona kuvandudza kuputira uye aesthetics yechivakwa.
Imwe yemabhenefiti akakurisa ekuvhara ndeyekugara kwayo uye yakaderera yekugadzirisa mutengo. Inogona kushandiswa kwemakore gumi nemashanu. Iyo yakamisikidzwa yakanyatso kufukidza system inobatsira iyo chivakwa kurwisa kutsemuka kunokonzerwa nekunyanyisa kupisa tembiricha, zuva, mhepo dzakasimba, uye mweya zvinosvibisa (senge chakuvhuvhu). Kuputirwa kunogona kuchengetedza zvigadzirwa pazasi kubva pasimba rehunyoro hunokonzerwa nemvura uye chando. Kuvhara kunogona zvakare kuwedzera chiyero chemoto chechivako. Chiyero chakakodzera uye kuzivisa kwetsika kunoratidza kuti kupfekedza kwedu kune chiyero chemoto cheB1.
Kunyangwe izvi zvinobatsira zvehunhu zvakakosha, vagadziri uye varidzi vedzimba vanosarudzawo chimiro uye vara rekupfeka zvinoenderana nesitayera, magadzirirwo uye neruvara kuti vagadzire yakasarudzika kutarisika.
Zvichienzaniswa nezvimwe zvekumonera zvinhu, kushandisa WPC veneers sekunamatira kune zvakwakanakira.
1. Iko hakuna kudikanwa kwejecha kana kusimbisa gore rega, izvo zvinogona kuve zvinoshanda zvakaoma nzira yemabhodhi, kunyanya pane akaomarara-kusvika-kunze.
2. Hupfumi hwehuni hwehuni hwehuni uye yakanaka anti-kupera uye anti-kusvibisa zvimiro zvinopa runako rwekunaka.
3. Kusiyana nehuni, inogadzirwa ne95% yakadzokororwazve mupurasitiki firimu uye zvishandiswazve huni machipisi, uye inopa garandi yemakore makumi maviri yekudzima uye kushatisa zvigadzirwa uye mapurojekiti ekutengesa uye ekugara.
Post nguva: Aug-27-2021